रेडमी बुड Pro प्रो, हामी तपाई हेडफोनको विश्लेषण गरिरहेका थियौं जुन तपाईले खोजिरहनु भएको थियो | Androidsis
फेरि हामी तपाईं ल्याउँछौं वायरलेस हेडफोन समीक्षा। तर यस पटक हामी केवल कुनै पनि सामना गरिरहेका छैनौं, आज हामीसँग एमआई-फ्यानहरू द्वारा अत्यधिक प्रत्याशित मोडलको विश्लेषण छ। हामी केहि दिनको लागि नयाँ परीक्षण गर्न सक्षम भएका छौं रेडमी बुड Pro प्रो र हामी तपाइँ उनीहरूको बारेमा सबै बताउँछौं।
पहिले नै शाओमीलाई राम्ररी चिन्नेहरूको लागि, फर्मबाट नयाँ ग्याजेट छ गुणस्तर र मूल्यमा उच्च अपेक्षा। र जोसँग अहिलेसम्म हस्ताक्षर उपकरणको अवसर छैन, बुड Pro प्रो त्यसो गर्न उत्कृष्ट अवसर हो।
1 बुड Pro प्रो, तिनीहरू केवल अर्को मोडेल छैनन्
2 अनबक्सिंग रेडमी बुड Pro प्रो
3 बुड Pro प्रो डिजाइन
3.1 चार्ज केस बड्स Pro प्रो
4 तपाईंले अपेक्षा गरेको सबै टेक्नोलोजी
5 प्राविधिक विशेषताहरु
बुड Pro प्रो, तिनीहरू केवल अर्को मोडेल छैनन्
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, एन्ड्रोइड्समा धेरै हेडफोन छन् जुन हामी प्रयास गर्न भाग्यशाली छौं। सबैजनासँग राम्रो चीज छ, र हामी जहिले पनि केही कारणहरू पाउँछौं किनकि ती लायक हुन सक्छन्। सब भन्दा मूल, सब भन्दा समझदार, सब भन्दा रंगीन वा सस्तो पनि। संग रेडमी बुड Pro प्रो, उहाँको धेरै कारणहरू जुन तपाईं आफ्नो अर्को अधिग्रहण बन्नुहुनेछ.
पाउनुहुने पहिलो हुनुहोस् बुड Pro प्रो छुट कुपनको साथ
कहिलेकाँही यस्तो देखिन्छ कि हेडफोनको एक मोडलमा हेर्नुहोस्, सबै देखे। र बाँकी र color्ग वा आकार भन्दा पर भिन्नताको बिन्दु प्राप्त गर्न गाह्रो छ। रेडमी बुड Pro प्रो डिजाइनमा बाँकीबाट अलग देखिन सफल भयो एक असामान्य तरीकाले सामग्री को उपयोग को लागी धन्यवाद।
वास्तवमा, यसको डिजाइनको बारे बाहिर खडा हुने पहिलो कुरा हो स्पर्श क्षेत्र छोडिन्छ कानको एक मा निर्मित चमकदार, पारदर्शी प्लास्टिक जुन गिलाससँग मिल्दोजुल्दो छ र त्यो उपकरण एक प्रदान गर्दछ धेरै प्रिमियम लुक। कुनै श doubt्का बिना, तिनीहरूसँग बाँकी रहेका विकल्पहरूबाट अलग देखिन्छन् हामी प्रयास गर्न सक्षम भएका सबैलाई बिभिन्न छवि.
अनबक्सिंग रेडमी बुड Pro प्रो
यो लामो प्रतीक्षित हेडफोनको बक्स भित्र हेर्ने समय हो। हामी यसबारे कुरा गर्ने अवसरलाई पास गर्न सक्दैनौं Mi को प्याकेजि, सधैजसो फरक मार्क गर्नुहोस् योग्यता र गुणस्तर र कार्यक्षमताको साथ। तपाईलाई भन्नु भएन, परिवर्तनको लागि हामी फेला पार्दछौं हामी आशा गर्न सक्छौं सबै। र यदि तपाइँ अब कुनै पर्खाइ लिन चाहनुहुन्न भने, अब तपाईको बुड now प्रो लाई अर्डर गर्नुहोस् Aliexpress मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य मा।
La चार्जिंग केस, जुन हाम्रो केसमा वास्तवमा राम्रो प्रकाशको खैरो रंग हो। यो भित्र छ हेडफोन आफैं। थप रूपमा, हामीसँग छ आधारभूत प्रयोग दस्तावेज र उत्पाद वारंटी। अन्तमा, चार्ज केबल, जुन यो समयको ढाँचामा छ USB प्रकार सी, र तीन प्याड को अतिरिक्त सेट बिभिन्न आकारको।
बुड Pro प्रो डिजाइन
एक प्राथमिक, तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न सक्षम हुनु अघि, बुड3प्रो को डिजाइन ध्यान आकर्षण गर्न को प्रबन्ध। र तिनीहरू यो किनभने तिनीहरू प्रदर्शन संग मूल उपस्थितिको कारण पारदर्शी र चमकदार "गिलास" को उपयोग हेडफोनको टच जोनका लागि। निस्सन्देह धेरै सफलता यसले तिनीहरूलाई आकर्षक र कसको समाप्त बनाउँछ तिनीहरूलाई बजारको नायक बनाउँछ।
नयाँ बुड3प्रो एक छ इन-कान ढाँचा "कानमा", र ती प्रसिद्ध राय जगाउने प्रसिद्ध प्याड को उपयोग। तिनीहरूसँग वास्तवमै सानो आकारको छ, र एक पटक राखिएको तिनीहरू केवल टच कन्ट्रोलहरू भएको अंश मात्र प्रकट गर्दछन्। प्रयोगकर्ता अनुभव धेरै सुधार हुनेछ यदि हामी तिनीहरूलाई "गम्मीहरू" प्रयोग गर्ने गर्छौं। पर्याप्त त्यो उत्तम हाम्रो शरीर रचना फिट, केहि पनि एक सुरक्षित होल्ड सुनिश्चित गर्नेछ.
हामी संग प्रत्येक इयरबडमा m 35 एमएएच चार्ज क्षमता कि हामीलाई एक स्वायत्तताको मजा लिन अनुमति प्लेब्याक को hours घण्टा सम्म गरि राख। यो सँधै हामीले प्रयोग भोल्युम स्तरमा निर्भर गर्दछ र हामीसँग सक्रिय आवाज रद्द गर्ने सक्रिय छ वा छैन। तपाईले हेडफोनमा खोज्नु भएको सबै चीज, तपाईंको बुड buy प्रो खरीद गर्नुहोस् छुट कुपनको साथ।
चार्ज केस बड्स Pro प्रो
यदि तपाईं चार्जिंग केसमा हेर्नुहुन्छ भने, यो पॉलिश गरिएको प्लास्टिकमा एकदम “राम्रो” टचको साथ समाप्त हुन्छ। आकार तिनीहरूलाई जेबमा सधैं बोक्नका लागि आदर्श हुन्छ जहाँसुकै। योसँग चुम्बकीय ढक्कन छ त्यसैले यो जहिले पनि उत्तम रूपमा बन्द हुन्छ र लोड प्रभावकारी हुन्छ। मोर्चामा हामी फेला पार्दछौं सिnch्क्रोनाइजेशनका लागि बटन हाम्रो स्मार्टफोनको साथ हामीले एक पटक मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
हामीले भन्नु पर्छ कि चार्जिंग केसको लम्बाई आकार दिएर, र हेडफोनहरू माथिबाट ठाडो रूपमा घुसाइएको छ। यसको मतलव यो हो कि पहिलो केही पटक हामी धेरै स्पष्ट छैनौं जहाँ प्रत्येक एक हुँदैछ। यद्यपि यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले चाँडै नियन्त्रण गर्नेछौं।
तल हामी फेला पार्दछौं लोड पोर्टअपेक्षित रूपमा, जुन सँगै आइपुग्छ USB प्रकार सी ढाँचा। यो छ 470 m० एमएएच चार्ज क्षमता र हामीसंग केवल दुई र आधा घण्टामा तपाईंको चार्जको १००% हुन सक्छ।
तपाईंले अपेक्षा गरेको सबै टेक्नोलोजी
यो आशा गरिएको थियो कि नयाँ रेडमी बुड Pro प्रो हेडफोन हुनेछ पछिल्लो प्रविधि, र त्यसैले यो छ, तपाईं केहि पनि याद छैन। हामीले टेक्नोलोजी भेट्टायौं ब्लूटूथ 5.2 प्रस्ताव गर्दै १० मिटर टाढासम्म सुपर स्थिर कनेक्शन। र थप रूपमा, यसले हामीलाई अनुमति दिनेछ एकै साथ दुई उपकरणहरूमा हेडफोन जडान गर्नुहोस्। यदि तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ केहि बुड get प्रो प्राप्त गर्नुहोस् Aliexpress मा छुट।
यसले टेक्नोलोजी पनि हाइलाइट गर्दछ स्मार्ट आवाज रद्द। हामी भेट्छौं तीन बिभिन्न मोडहरू जुनबाट छनौट गर्न। तर हेडफोन आफैं हुन् आवाज स्तर पत्ता लगाउन सक्षम उपयुक्त मोड लागू गर्न। तिनीहरू पाउँछन् परिवेशी ध्वनि को sound 35 dB सम्म कम गर्नुहोस्। धन्यबाद ट्रिपल माइक्रोफोन र एक अद्वितीय एल्गोरिथ्म असाधारण पृष्ठभूमि शोर फिल्टर.
अर्को शक्तिको र त्यो सबै भन्दा "गेमरहरू" को लागि महत्त्वपूर्ण हो त्यो हो बुड Pro प्रोमा "गेमि” "मोड छ। यसलाई सक्रिय गर्दै हामी पाउँछौं ten mill मिलिसेकेन्डमा विलम्बता कम गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन, पीसी, वा ट्याब्लेटको साथ आफ्नो मनपर्ने खेलको एकल विवरण याद गर्नुहुनेछ। Y तिनीहरू MIUI का साथ आश्चर्यजनक साथ पाउँछन् पप-अपको साथ द्रुत सम्बन्धलाई धन्यवाद।
अन्तमा, केहि चीज जुन हामी हेर्नबाट बच्न सक्दैनौं स्वायत्तता हो। बुड Pro प्रोको साथ हामी संगीत सुन्न सक्दछौं चार्जिंग जडानको आवश्यकता बिना २ 28 घण्टा सम्म। प्रत्येक पूर्ण ब्याट्री चार्ज हामीलाई प्रदान गर्दछ १० घण्टा निर्बाध सम्म संगीत प्लेब्याक वा तपाइँको मनपर्ने श्रृंखला।
मोडेल बुड Pro प्रो
दूरी २० मिटर सम्म
स्मार्ट एएनसी तीन मोडहरू उपलब्ध छन्
स्वायत्तता 28 घण्टा
हेडफोन ब्याट्री 35 mAh
ब्याट्री केस 470 mAh
हेडफोन चार्जिंग समय 1 घण्टा
चार्ज समय केस 2.5 घण्टा
द्रुत चार्ज १० मिनेटको साथ hours घण्टा प्रयोग
लोड ढाँचा USB प्रकार सी
ताररहित चार्ज गर्दै हो - Qi
हेडफोन तौल 4.9 g
केस वजन 55 g
लि link्क खरीद गर्नुहोस् बुड Pro प्रो
डिजाइन मूल र प्रीमियम लुक
कनेक्टिविटी ब्लुटुथ 5.2
ताररहित चार्ज गर्दै मिल्दो Qi
डिजाइन र उपस्थिति
सानो सहज ज्ञान युक्त कसरी तिनीहरूलाई केसमा राख्ने
इन-ईयर ढाँचा र "गम्मीहरू"
मामला मा फिट
रेडमी बुड Pro प्रो
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » समीक्षा » रेडमी बुड Pro प्रो, विश्लेषण, मूल्य र राय